Nisy tranga COVID-19 voalohany tany Tonga
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tonga » Nisy tranga COVID-19 voalohany tany Tonga
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Tonga • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Oktobra 29, 2021
Ny praiminisitra Tonga Pohiva Tu'i'onetoa
Ny praiminisitra Tonga Pohiva Tu'i'onetoa dia nilaza fa ny governemanta dia mikasa ny hanao fanambarana amin'ny alatsinainy raha hisy ny fanakatonana nasionaly.
Ny governemanta Tonga dia hanambara ny alatsinainy raha hapetraka eo ambanin'ny fanakatonana nasionaly ny nosy.
Nisy tranga COVID-19 iray tamin'ireo mpandeha 215 tonga avy any amin'ny tanànan'i Christchurch.
Manodidina ny 31 isan-jaton'ny mponina ao Tonga no vita vaksiny tanteraka ary 48 isan-jato no efa nahazo fatra iray farafahakeliny.
Nanambara izany ny tompon’andraikitra any Tonga Tonga dia tsy misy coronavirus intsony aorian'ny mpandeha avy amin'ny sidina Christchurch, Nouvelle Zélande dia niatrika fitsapana tsara ho an'ny otrikaretina COVID-19.
Ity no otrikaretina COVID-19 voalohany voarakitra ao amin'ny fanjakana Polineziana hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra coronavirus manerantany.
Tamin'ny lahateny tamin'ny onjam-peo androany dia nanamafy ny praiminisitra Tonga Pohiva Tu'i'onetoa fa nisy tranga COVID-19 iray tamin'ireo mpandeha 215 tonga avy any amin'ny tanànan'i Christchurch.
Nilaza i Tu'i'onetoa fa mikasa ny hanao fanambarana ny alatsinainy ny governemanta momba ny hampiharana ny fanakatonana nasionaly.
Nandritra izany fotoana izany, ny praiminisitra dia nitaky ny Tonga rehetra hanaraka ny fanalavirana ara-batana sy hanaraka ny fepetra mifandraika amin'ny coronavirus.
Araka ny TongaNy lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana Siale 'Akau'ola, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny polisy ary ny mpiasa rehetra miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Fua'amotu rehefa tonga ny sidina Christchurch dia napetraka ao anaty quantine. Nampiany koa fa efa vita vaksiny avokoa ireo miasa akaikin’ny sidina.
Christchurch Ny mpandeha amin'ny sidina dia nahitana mpiasa ara-potoana sy mpikambana ao amin'ny ekipa Olaimpika Tonga.
Tonga any avaratratsinanan’i Nouvelle-Zélande no misy azy, ary misy mponina 106,000 XNUMX eo ho eo.
Manodidina ny 31% amin'ny Tonga no vita vaksiny tanteraka ary 48% no nahazo fatra iray farafahakeliny, hoy ny vondrona mpikaroka Our World in Data.
Tonga dia anisan'ireo firenena vitsy sisa tavela eto amin'izao tontolo izao izay nisoroka ny fihanaky ny COVID-19. Tahaka ny ankamaroan'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, ny fitokanan'i Tonga dia nanampy tamin'ny fitazonana azy ho azo antoka fa miatrika fanamby lehibe izany raha toa ka mihatra ny viriosy noho ny rafi-pahasalamany tsy ampy.
Ny firenena akaiky an'i Fiji dia nisoroka ny fipoahana lehibe hatramin'ny volana aprily, rehefa namakivaky ny rojon'ny nosy ny variana Delta an'ny coronavirus, nahafaty olona 50,000 mahery ary nahafatesana 673 farafahakeliny.